Dastabej » कोभिड १९ का बास्तविक हिरो १९ बर्षीया किशोरीः जसले भेरीमा एकै दिन १२ शव प्याक गर्थिन
कोभिड १९ का बास्तविक हिरो १९ बर्षीया किशोरीः जसले भेरीमा एकै दिन १२ शव प्याक गर्थिन – Dastabej
कोभिड १९ का बास्तविक हिरो १९ बर्षीया किशोरीः जसले भेरीमा एकै दिन १२ शव प्याक गर्थिन
नेपालगन्ज— महामारीको जोखिममा साहसिलो काम गरेको भन्दै बारबरा फाउन्डेसनले पुरस्कृत गरेपछि भेरी अस्पताल नेपालगन्जका सरसफाई कर्मचारीकारुपमा काम गर्ने १९ वर्षीय कबिता डिसी चर्चामा छिन । उनी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा भेरीमा काम पाएकी हुन । कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि सरसफाई काम संगसंगै थप जिम्मेवारी बढ्यो । शव व्यवस्थापनको जिम्मा कवितालाई दिइयो । ‘मिति र दिन मलाई थाह भएन । तर अस्पताल प्रशासनले त्यो शवलाई प्लास्टिकमा प्याक गर्ने जिम्मा दिएपछि म डरार सुरुमा काँमे । एक छिन सोँचे शव प्याक गर्दा मलाई नि कोरोना सर्छ । त्यसैले यो जागीर छोड्छु भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्,‘फेरि यो पाएको जागीर छोडेर जाने कहाँ हो ? अनि डराईडराई बाध्यताले शवलाई प्याक गरिदिएँ ।’ उनले गत कात्तिकबाट भेरीमा काम पाएकी हुन ।
बाध्यताले गरेको जागीरले उनलाई बिस्तारै काम गर्न त्यति सहज भएन । कोरोनाको दोस्रो लहरमा भेरी अस्पतालमा एकै दिन डेढ दर्जन बढी संक्रमित हरुको मृत्यु हुन थालेपछि डीसीको व्यस्तता झन बढ्दै गयो । उनले एकै दिन १२ वटा शव प्याक गरेको अझै बिर्सेकी छैनन् । उनको घर खासमा जाजरकोट हो । उनका अनुसार घरमा सानिमा, बुबा र भाइ छन् भने दाइ रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । उनी कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेर पढ्न छाडेकी छन् । उनले पढ्न चाहेर पनि अवसर नपाएको गुनासो गरिन । उनको मासिक तलब १२ हजार तोकिएको छ ।संक्रमणको जोखिम र शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डरले २०–२५ जनाले काम छाडेको उनले सुनाइन् । शनिबार एक लाख रुपैयाँको पुरस्कार ग्रहण गर्न उनी पहिलो पटक प्लेन चढेर काठमाडौं पुगिन । पुरस्कारको २५ प्रतिशत कटाएर उनले ७५ हजार बुझेको बताईन । पुरस्कार पाउँदा खुसी लागेको छ, उनले दस्ताबेजसंग खुसी साटिन । शव व्यवस्थापनसंगै सरसफाईको काम गर्थिन । त्यसबाहेक उपचारका लागि एम्बुलेन्समा ल्याइएका विरामीलाई स्टेचरमा राखेर ईमरजेन्सी कक्षसम्म पुर्याउने गरेकी थिईन ।
बाँकेमा गत बर्ष पहिलो पल्ट गत चैत्र ११ गते नेपालगन्जमा १ जनामा कोरोना देखियो । त्यसको १ महिनापछि बाँके कोरोना संक्रमणको हटस्र्पोट बन्यो । नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाईनमा एक जना युवकको उपचार नपाएर कोरोनाबाट पहिलो ज्यान गयो । उनको शव उठाउने कोही भएनन् । संक्रमितको छेउमा जान सबै डराउँथे । कोरोना त्राहीत्राही थियो यहाँको वातावरण । संक्रमण बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमितहरु उपचारका लागि भेरी अस्पतालमा भर्ना हुन थाले । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि नयाँ रोग भएकाले सबै डराउने नै भए । तर पछिल्लो समय भेरी अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा नमुना काम गरेको छ । भेरी अस्पतालका प्रमुख. डा प्रकास थापा, फिजिसीयन डा. राजन पाण्डे लगायत ७ जना बारबारा फाउण्डेसनबाट पुरस्कृत भएका छन् ।
१८ श्रावण २०७८, सोमबार ११:५५ प्रकाशित